စျေးပေါသော Xiaomi Mi Band 4: အမေဇုန်ဈေးအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Androidsis
Xiaomi Mi Band4သည်အမေဇုန်တွင်ယခင်ကထက်စျေးနှုန်းချိုသာသည်။
Nerea Pereira | | အခြားကိရိယာများ
အကယ်၍ သင်သည်စမတ်ဖုန်းကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရှာဖွေနေလျှင်အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုအတွက်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုထက်ပိုပါကအာရှထုတ်လုပ်သူ၏စမတ်လက်ကောက်သည်စဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ကျနော်တို့စဉ်းစားလျှင် Xiaomi Mi Band4သည်အလွန်စျေးပေါသည်။
ပစ္စည်းတစ်ခု အားနည်းချက်များထက်ပိုမိုအားသာချက်များရှိသည်၎င်းမှာကြီးမားပေမယ့်စိတ်ကိုထားရန်လိုသော်လည်းစပိန်တွင်စျေးနှုန်းသည်တရုတ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၎င်းသည်ယုတ္တိရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကုန်ကျသောယူရို ၄၀ နီးပါးကိုပေးဆပ်ရန်နာကျင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကကုန်ကျသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Amazon ကအိမ်ကိုပြတင်းပေါက်ကနေဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်လို့ပါ စျေးပေါ Xiaomi Mi Band4ကိုဝယ်ကြလော့အခုတော့ယူရို ၃၀ အောက်ကုန်ကျပါတယ်။
ယခုတွင်သင်သည်စျေးပေါသော Xiaomi Mi Band4ကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ Amazon သည်ယူရို ၃၀ သာကျသင့်သည်
ဒီမျဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း Xiaomi Mi Band4ကိုယူရို ၂၉.၉၈ နဲ့သာဝယ်ယူနိုင်သောကြောင့်ယခု Xiaomi Mi Band 29.98 ဟာအရင်ကထက်စျေးသက်သာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များပါ ၀ င်သောမြှင့်တင်ရေးတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သင်မလွတ်သင့်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ဤအစွမ်းထက်သောစမတ်လက်ကောက်၏နောက်ကွယ်ရှိကြီးမားသောအသိုင်းအဝိုင်းကိုစဉ်းစားပါ။ ပထမဆုံးအနေဖြင့်သင်သည်သင်၏နှလုံးခုန်နှုန်း၊ သင်လုပ်ဆောင်သောမည်သည့်လှုပ်ရှားမှု၊ မနက်တိုင်းအိပ်စက်သည်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကုန်ခန်းနိုင်သောဘက်ထရီနှင့်၎င်းသည်၎င်း၏ full-color OLED မျက်နှာပြင်ကသင့်အားခွင့်ပြုမည့်ဒီဇိုင်းကိုထည့်သွင်းရမည်။ ပြproblemsနာမရှိဘဲမည်သည့်အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုရန်။
အကောင်းဆုံး? Xiaomi Mi Band4မှာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့သုံးစွဲသူအသိုင်းအဝိုင်းရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီလှုပ်ရှားမှုလက်ကောက်ထဲကအကောင်းဆုံးကိုရယူဖို့သင်မှာစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။ ယခုမှာသော Xiaomi က Mi Band4စျေးပေါ အဖြစ်မှန်ပဲ၊ ဒီအဆုံးသတ်မတိုင်ခင်ဒီသဘောတူညီချက်ရဖို့သင်ဘာကိုစောင့်နေတာလဲ အမေဇုံကမ်းလှမ်းမှု?
စျေးပေါသော Xiaomi Band4ကိုဝယ်ပါ။ ၎င်းသည်ယူရို ၃၀ အောက်သာရှိသည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » အခြားကိရိယာများ » Xiaomi Mi Band4သည်အမေဇုန်တွင်ယခင်ကထက်စျေးနှုန်းချိုသာသည်။
aliexpress ကိုအသုံးပြုသော Amazon သည် ၂၄ ယူရိုအထိစျေးသက်သာသည်
Motorola RAZR, ငါတို့မျှော်လင့်ထားသည့်ခေါက်နေသောပုံစံ
အကယ်၍ သင်သည် YouTube ၏ပရီမီယံအသုံးပြုသူများဖြစ်လျှင် Google Home Mini ကိုအခမဲ့ရနိုင်သည်